Palm Springs, CA • Body Mass sy NuRu Massage
Fandriho ny vatanao sy ny fanotra anao any Palm Springs, CA.
Palm Springs dia tanàna fialan-tsasatra any amin'ny Riverside County, Kalifornia, Etazonia, ao amin'ny Coachella Valley any Desert any Colorado. Ny tanàna dia manodidina ny 94 kilaometatra toradroa (240 km2), ka lasa tanàna lehibe indrindra ao amin'ny Riverside County ny velarany. Ny kilometatra toradroa hafa rehetra ao an-tanàna dia ao amin'ny tany famandrihana Agua Caliente Band of Cahuilla Indians. Mamandrika ny fikosoham-batana sy fanorana nuru any Palm Springs, CA.